Ikhaya / Imisebenzi/ Ukuvikelwa Kwembeswa
Le nkampani kwaba eyakhelwe ukusiza ukusindisa amakhaya abantu ekubonakaleni. Abalingani bethu bonke bagxila ekuzivikeleni ekumboneni e-New Jersey noma eNew York. Siyaqonda amathuba aphambili wokuxazulula isambulela sisebenzisa icala, ukuguqulwa kwemalimboleko, ukuqothuka noma ukuthengisa / ukuthengiswa okufushane. Sisebenza nabantu ukuthenga nokuthengisa izakhiwo. Singachaza ama-nuances omthetho kanye nendlela eyodwa yalezi zinhlelo esebenzisana ngayo. Ukukhuluma nommeli namuhla ngezinketho zakho kungasusa isisindo sokukhathazeka esifubeni sakho.